Htc Thunderbolt oo la soo bandhigay, Doon HD leh kamarad hore | Androidsis
Terminalka oo maalmahan si aad ah looga hadlay ayaa ugu dambeyn si rasmi ah loo sameeyay, the Htc Onkod, terminaal markii la ogaado isku dhex dhexaadkiisa waxaan dhihi karnaa wax cusub kuma soo kordhineyso wixii horey loo yaqaanay. Htc wuxuu sii wadaa inuu ku dhufto hal nooc qalab dhowr ah isagoo si fudud u badalaya mid ama midkoodna qeexida gudaha isla markaana beddalaya baqshadda.
El Htc Thunderbolt wuxuu leeyahay qeexitaanno lamid ah Htc Desire HD ama sidoo kale looga yaqaan USA sida Htc Waxyooday 4G laakiin ku darista kamarad hore oo ah 1,3 Mpx oo loogu talagalay wicitaannada fiidiyowga. Taleefankan casriga ah waxaa lagu suuqgeynayaa dalka Mareykanka shirkadda Verizon, si ka duwan tusaalaha aan kor ku soo sheegnay, kaasoo ay sameyn doonaan AT&T.
Htc Thunderbolt Rabitaanka HD oo leh kamarad hore.
Qeexitaannadu waa sidaan uga faallaynay isla sidii Desire HD oo ay ku jiraan shaashad 4,3-inji ah oo xalkeedu yahay 800 × 480 pixels. Ka sokow kamaradda hore ee 1,3 mpx, waxay leedahay kamarad kale oo 8 Mpx ah oo gadaasheeda ku leh labalaab laydh LED ah iyo awoodda duubista HD.
Mashiinka qalabkani waa a Processor Qualcomm Snapdragon hal-xuddun (wararka xanta ah ayaa ku ekaaday taas, warar xan ah) waxayna ku socotaa xawaare dhan 1 Ghz. Xaddiga xusuusta RAM ee ay tahay inuu aad ugu dhowaado ta Desire HD lama cayimin xilligan.
Kaydinta codsiyada iyo feylasha, waxaa ku jira kaarka 32 micro micro SD oo ma seegi karo Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 2.1 iyo isku xirnaanta GPS. Waxay sidoo kale la jaanqaadi kartaa teknolojiyada DLNA si ay ugu gudbin karto qalabka kale.
Yimaada Android 2.2 iyo nooca cusub ee Sense, interface u gaar ah boosteejooyinkan Htc. Noocan cusub waxaad ku heli doontaa inta ka hartay hagaajinta ay ku dartay, sida goobta teerminaalka, dukaanka internetka ee Htc, iyo maaraynta keydka iyo xiriirada daruuraha.
Waxay ka kooban tahay Skype horay loo sii rakibay oo si buuxda loogu dhex daray nidaamka Htc si aad awood ugu yeelatid inaad wicitaan ku sameyso codsigan ma matali doonto wax dhibaato ah.
Ugu dambeyntiina, ku dar in ay ku jirto Doby sound iyo SRS oo ku hareereysan kuwaas oo si weyn u wanaajin doona codka markii aad daawaneyso fiidiyow kasta oo ku saabsan qalabkan iyo inaan si raaxo leh ugu taageeri karno dusha sare ee dusha sare iyada oo ay ugu mahadcelineyso lugteeda taageerada dambe.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » HTC » Htc Thunderbolt ayaa la soo bandhigay, Desire HD oo leh kamarad hore
Hal su'aal, oo leh Skype miyaad wicitaano fiidiyoow ah ugu samayn kartaa kombuyuutar?
Ku jawaab humicees
Hagaag maahan in la yiraahdo ma soo bandhigeyso wax cusub uma muuqato, waxay soo bandhigeysaa LTE oo horeyba ugu filneyd
Google wuxuu ka jawaabayaa qaladka Android dirista SMS